Ferguson oo doortay kan fiican Diego Maradona iyo kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi – Gool FM
(Yurub) 28 Jan 2019. Tababaraha halyeeyga ah ee Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa u arka kabtanka kooxda Barcelona Lionel Messi inuu ka fiican yahay halyayga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Diego Maradona.
Wargeyska “The Times” ee dalka England ayaa tilmaamay in muran uu dhexmaray suxufiga weyn ee Hugh McFarlane kaasoo dhawaan geeriyooday iyo laacibkii hore kooxda Liverpool ee Graeme Souness, taasoo ku aadan keebaa wanaagsan xidigaha Messi iyo Maradona?.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Graeme Souness uu u doortay Messi inuu yahay kan fiican, inkastoo uu la ciyaaray Maradona wax ka badan hal jeer, halka Hugh McFarlane uu doortay Maradona.
Hadaba murankaas ayaa waxaa loo wareejiyay dhanka tababaraha halyeeyga ah ee kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson isagoo ka hadlaya fikirkiisa ayaa wuxuu yiri:
“Aniga ahaan waxaan ku biirayaa fikirka Graeme Souness, Maradona taariikhdiisa wuxuu qaab ciyaareedkiisa ugu sareeyay ku jiray muddo dhowr sanadood ah, waana taas sababta uu Lionel Messi u fiican yahay”.
Waxaa xusid mudan in kala doorashada xidigaha Messi iyo Maradona, ay noqotay dood soo jireen ah, iyadoo ay muran xoogan ka dhax dhelisay taageerayaasha labadan xidig ee reer Argantina.
RASMI: Alvaro Morata oo ku biiray kooxda Atletico Madrid